“My American friends are pulling for the underdog in our soccer match against South Korea. ဆိုသည့် ဝါကျ၌ underdog ၏အဓိပ္ပါယ်ကို နားလည်သူများသည် အမေရိကန်မိတ်ဆွေများသည်မြန်မာအသင်းကိုရရန် အားပေးနေကြကြောင်း နားလည်ပေလိမ့်မည်။South Korea အသင်းသည် World Cup အဆင့်ထိရောက်ပြီး ယှဉ်ပြိုင်နေသည့်အသင်းဖြစ်ပါသည်။ နိဂုံးအနေဖြင့် ကျွန်တော်တို့မြန်မာအားကစားအသင်းများကအားကစားသမားများနှင့်အမေရိကရောက်နေသည့်မြန်မာအားလုံးတို့သည် underdog ဘဝနှင့်မကျေနပ်နေသင့်ပါ။ Gold medal and Silver medal တို့မရရင်နေပါစေ။အနည်းဆုံးတော့ success အောင်မြင်မှုနှင့်အမြဲတန်းရင်ဆိုင်နေရသည့် winners များဖြစ်ကြပါစေဟု ဆုတောင်းရင်း နားပါဦးမည်။
ဇီဇီခင်ဇော် says: အားကစားနဲ့ နီးချက်ကတော့ တစ်ခုမှ မသိဘူးး
လုံမလေးမွန်မွန် says: အပေါ်ဆုံး ၂ ကြောင်းလောက်တော့ နားလည်သေးတယ်..
ကျန်တာ ဘာမှ မသိတော့ဝူး. ဦးနှောက်ကလည်း အလုပ်မလုပ်တော့ မမှတ်မိဝူး.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12176
Alinsett @ Maung Thura says: ဖတ်ကား ဖတ်၏… .
Shwe Ei says: -TOEFL မှာ vocabulary သင်သလိုဘဲ… ကိုယ်တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးတဲ့
ရှာခိုင်းသလိုမျိုး ခံစားနေရတယ် :P